SIDA LOO KORO BERGENIA, QARSOODIGA AH EE BEERTO IYO DARYEELIDDA UBAXYADA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Maqaalkani waxaan kuu sheegi doonaa warshad noocan ah sida Badan. Waxaad baran doontaa waxa ubaxa Badan u taagan yahay, iyo sidoo kale inaad hesho macluumaad ku saabsan abuurista iyo daryeelida berrin furan. Sidoo kale, ma nooma jeedi doono sifooyinka dhalida ee warshad cayiman, xeerarka waraabinta iyo daryeelka.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha daawooyinka lagu sameeyay oo ku saleysan bergenia, waxay leeyihiin xayawaan, antimicrobial iyo anti-bararka.
Waqtiga ugu wanaagsan iyo meesha ugu wanaagsan ee lagu beerayo bergeniya
Qaybtan, waxaan ka fakari doonaa meelaha ugu wanaagsan ee laga beerayo bergenia, iyo sidoo kale isku day inaad ogaatid markaad warshadda gasho.
Badan (ama shaaha Mongolian) - Tani waa dhir daaweed oo dhirta oo badan. In Europe, waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin loo qurxiyo, iyo Altai - qaab shaah ah (banyan waxaa loo yaqaan "shaaha Chigir"). Dabeecadda, warshadani waxay ku badan tahay Bartamaha Aasiya, sidaas darteed xaaladaha koritaankiisu waa inay ahaadaan kuwo ku habboon.
Ubaxa ugu badan waa in la beeray guga hore si ay u koraan xagaaga oo ay awood u leeyihiin inay si ammaan ah u gudbiyaan dhammaan sumadaha cimilada iyo jirrada.
Markaad beerto diyaargarow waxaad u baahan tahay inaad doorato meesha saxda ah. Badan ma dareemayso mid aad u raaxeysanaya qorraxda, sidaas darteed, fursadda ugu fiican ee beerto waxay noqon doontaa meel ay riyaha qoraxdu ku dhufteen keli ah oo kaliya subaxda iyo fiidkii.
Sidaas darteed, qorraxda dhirta waxay noqon doontaa in penumbra dhexdhexaad ah. Markaad beerto si buuxda, Badan waxay joojin kartaa ubax!
Waa muhiim! Markaad qorraxda ku beerto, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh ula socoto qoyaanka ciidda iyo badiyaa biyaha warshadda.
Seddex siyaabood oo beerto bergenia ah
Meesha iyo waqtiga la beereeyey ayaa la doortay; hadda waa qiimo ay ku ogaanayaan waxa micnaheedu yahay dhirta bergenia waxaa lagu beeray dhul furan.
Warshad Bergenia waxaa lagu beeray seddex siyood:
beerashada rosettes ee caleemaha;
ka soo degaya weelka;
Xaaladda kowaad, rizboorka si taxaddar leh ayaa loo qoday (uma baahna in la isku dayo inuu kala saaro xididada dhulka) waxaana lagu beddelaa meel cusub. Waxaad samayn kartaa habka xitaa marka uu dhirta ku baxo caleemo.
Doorashadani waa tan ugu fiican, maadaama ay suurtogal u tahay in ay soo celiso geedka inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Si kastaba ha ahaatee, transplanting ayaa ugu fiican xilliga dayrta.
Waa muhiim! Beerta loo yaqaan "rosettes" lama sameyn karo inta lagu jiro ubax.
Iyada labaad ee, geedo waxaa loo isticmaalaa in Gagaab ee weelka. Dhulka ayaa la fuliyaa xilliga gu'ga, isagoo xididdada ka soo jiidaya dhoobada dhulka iyo beeritaanka dhulka. Haddii dhirtu ay kor u kacdo, waxaad yareyn kartaa xididada.
Doorashada saddexaad waxay ku beeri doontaa xididada leh burooyinkeeda hurda. Si arrintan loo sameeyo, qodo qayb ka mid ah xididka leh 5-6 naaso oo qoyan. Ka hor inta aadan dhulka ku beeri, waxaad u baahan tahay inaad qabato rhizome biyo 2-3 saacadood. Sidoo kale, qaabkan xididada waa la keydin karaa oo la qaadi karaa. Si taas loo sameeyo, waxay ku daboolaan caws iyo wax yar qoyan.
Waa muhiim! Marka kaydinta rhizomes waa in aan loo oggolaan in qoyaan sare, haddii kale xididada way qudhmi karaan.
Sida loo daryeelo ubax
Badan, sida geedka kasta, waxay u baahan tahay daryeel qaar. Sidaa daraadeed, waxaan kuu sheegi doonnaa sida loo raaco si ay uugu farxiso muuqaal caafimaad leh iyo ubax.
Badan - geedka aan la qabin Sidaa daraadeed, dhinacyo badan waa in la xusuustaa kuwaas oo ah kuwa ugu muhiimsan:
ciidda waa in aan loo oggolaan in la qalajiyo;
geedka hoostiisa ah waa inaysan istaagin qoyaan;
Caadi ma sameyn kartid in lagaa bedelo.
Haddii ay jiraan biyo hoos yimaada dhirta, waxay si deg deg ah u kala jajabin doontaa. Si aad tan uga fogaato, waxaad u baahan tahay inaad si tartiib tartiib ah u socoto, laakiin badi waraabi geedka, ama ku beeri dhulka dhulka leh hannaan fiican oo dheecaan leh.
Waa maxay ciidda, haddii ay quudiyaan dhirta
Carrabku waa substrate ah oo uu dhirta ku hayo oo ka soo jeeda nafaqooyinka. Sidaa darteed, badanaa waxay ku xiran tahay dhulka.
Dhammaan noocyada Badana waxay door bidaan dhulbeereedka, asiidhka kaas oo la yareeyo eber. A kala duwan ee ciidda leh hantida dheecaan wanaagsan waa isku darka soo socda: 2 qaybood oo cammuud ah, 1 qaybood oo ah dhul sodan iyo tiro yar oo dhagax quruxsan.
Haddii aad leedahay loamy carrada, samee compost, ciid iyo humus. Doorashadan waa la aqbalayaa geedka.
Haddii aad xiiseyneyso, marka loo eego cunto badan, jawaabtu waxay noqon doontaa xiga - waxba. Dharka ugu sareeya ee bergenia waxaa la soo bandhigay kaliya ka dib markii ubax ah foomka of Bacriminta adag ee adag.
Xaqiiqdii, warshadu waxay samayn kartaa quudin dheeraad ah, dabcan, haddii ciidda ku filan nafaqo leh. Waxaa habboon in la ogaado in codsanayo quudin dheeraad ah waqti kasta oo kale waa jawaab kale oo su'aasha ah "Maxay badan tahay ma u ubax?".
Caleemaha la gooyaa waxaa lagu sameeyaa oo kaliya marka dhirtaada lagu beeray meel caan ah oo cufan oo cidhiidhi ah caleemo qulqulaya.
Laakiin! Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad sameyso cayil.
Waxaa haboon in la xusuusto in caleemaha dhacday ay u adeegaan sidii warshad loogu talagalay ilaalin dheeraad ah oo ka soo dhaxeysa dhaxan, sidaa daraadeed waxaa fiican in aan iyaga ka soo saaro ka yar baadiyaha.
Hadda waxaad ogtahay in daryeesho badani aysan ahayn mid culus, laakiin xeerarka aasaasiga ah, si kastaba ha ahaatee, waa in la raaco.
Waxaan hore u tixgelinnay doorashooyinka beeritaanka bergenia, koraya iyo daryeellaha, hadda waa in aan tagnaa dhalmo warshadan. Waxaa jira laba fursadood oo tarmaan:
Kee iyaga ka mid ah oo ka fiican oo ka sahlan - waxaad go'aansataa, oo hadda waxaan tixgelin doonaa labada ikhtiyaar.
Daabacaadda abuurka waxaa lagu magacaabaa generative, laakiin kuwan qaybaha dhirta yaryar Ma isla markiiba lagu beeray dhul furan. Ka dib markii yar (qiyaastii 2 mm) miraha muuqaalka geedka, waa in la ururiyaa oo lagu beeraa weel yar.
Wixii soocasho wanaagsan, miraha waxaa lagu meeleeyaa xal fungicide ah, kaasoo laba jeer shaqeynaya laba jeer: jeermisyada iyo dedejinta biqilka. Ka dib markii laga beerto abuurka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo qoyaan ciid ah oo hooseeya, iyo marka diirka jilicsan ama daadad kale oo muuqata, dhulka waa in la furo.
Iyada oo daryeel ku habboon, waxaad ka heli kartaa badan oo geedo yar yar laga soo miraha. Marka dhererka biqilku uu gaaro 12-15 cm, waxaa lagu beddelaa dhul furan. Faa'iido la'aanta bergenia sii kordhaysa abuurka waa ubax goor dambe (dhirta yaryar waxay bilaabi doontaa in ay ubaxdo kaliya 2 sano kadib).
Sidoo kale, waxaa haboon in la xusuusto in budheeniin lagu beeray dhul furan waa mid aad u ma jecla bedelka. Sidaa darteed, waxaa habboon in la fuliyo tallaabadan aan ka badnayn hal mar sanadkii.
Faafinta by gooyn waxaa loo yaqaan dhirta. Tani waa hab sahlan oo dhakhso badan oo lagu soo saari karo inta badan.
Iyada oo habkan loo isticmaalo, rhizomes da 'yarta ah ayaa loo isticmaalaa, taas oo si dhakhso ah u qeybisa, dib loo soo celiyo, sidoo kale waxay qaadataa xidid ka fiican. Marka transplanting, qayb ka mid ah xididka ayaa loo kala tagaa, tegaayo 2-3 caleemo (ama 5-6 ku hari) on. Qoto dheer ee beerto waa 4-5 cm, oo aan laga dhaafin.
Marka la beero dhirta dhowr jeer, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo masaafada 40-50 cm inta u dhaxeysa, si aanay u dhaawacin jiilka "deriska" inta lagu guda jiro kala-guurka kadib. Dhirta Bergenia waxaa loo kala qaybiyaa hal mar 5tii sanoba mar.
Ma taqaanaa? Daawo dhaqameed waxay isticmaashaa beranne daaweynta qaaxada, laabotooyinka iyo cudurrada mareenka kaadida. Daawada Mongolian waxaa loo isticmaalaa sida daaweynta lalabbada iyo matagidda.
Cudurrada Badan iyo Cayayaanka
Badani ma aha mid saameyn ku yeeshay cayayaanka, sababtoo ah waxay leedahay walxo kiimiko ah oo dabiici ah oo iyaga ka fog.
Cayayaanka ugu muhiimsan waa ciqaabta pennica (si kale haddii loo dhigo, xakameynta cicada) iyo nematode.
Cayayaanka ayaa u muuqda, inta badan, on dhirta in lagu beeray hooska, ee ciidda qoyan ee aad u badan.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee cunnadu waa dheecaanka qarsoon, oo u eg sida candhuufta. In, dirxiga pennitsa horumariyo, kaas oo sidoo kale halkaas ku hibernate. Markaad ka shaqeyneyso kiimikooyinka xayawaankani wuxuu ilaaliyaa dirxiga waxyeellada suurtagalka ah.
Si aad uga soo qaadatid kabaha beertaada, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kiimikooyin khaas ah (tusaale ahaan, Tsvetofos iyo Intavir), iyo isticmaalka hababka "old-fashioned" ma shaqayn doonaan.
Waa muhiim! Daaweynta kiimikada waa in la sameeyaa ka dib marka ubax.
Nematodes waa wareegyo wareeg ah oo ku nool dhulka ku xiga xididada. Haddii nematode dhirbaaxo badanaa, dhirta ayaa ku dhowaan karta in la badbaadiyo.
Tilmaamaha nematodes waa dirxiga ee qaab aan caadi ahayn. Goolashu waxay dhigaan farcanta qaabka kubbadaha isku xidha xididdada geedka.
Markaad bergenia ku beddesho, goobta laga bilaabo beerista ugu dambeysay waa in lagu daaweeyaa kiimikada oo aan lagu beerin muddo ka badan hal sano.
Badan ayaa sidoo kale ku dhici karta "jirran" leh caleenta caleen. Xaaladdan oo kale, caleemaha geedka waxaa lagu daboolay dhibco mugdi ah, kaas oo, wakhti ka dib, noqdaan cawl-buni.
Dhinaca dambe ee caleemaha waxaa lagu daboolay ubaxyada cad. Tani fangaska waa baraf u adkaysta. Nutultize cudurku wuxuu noqon karaa jajab ah qaybaha ay dhibaatadu saameysey. Sidoo kale, waad isticmaali kartaa Baydhada biyaha.
Badan waxay u adkaysantaa cudurada kale, sidaas darteed uma baahnid daaweyn dheeraad ah.
Waxaanu kuu sheegnay wax ku saabsan warshadda loo yaqaan "Badan". Hadda waxaad ku beeri kartaa beertaada, iyo si taxadar leh, waxay sannad walba ku farxi doontaa ubaxyo casaan leh.
Intaa waxaa dheer, ogaansho ku saabsan alaabta daawooyinka ee geedka, waxaad u dabbaqi kartaa caawinta ubax this daawo kale.